IDiploma - Isazi se-3D Modeling - iGeofumadas
IDiploma - 3D Modeling Expert
Le khosi ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wokumodela we-3D, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Ngokunjalo, labo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba bayazi kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukudidiyela ukwakheka okuyizinhlangothi ezintathu kumjikelezo wayo ohlukile wokutholwa, ukumodeliswa nokuhanjiswa kwedatha kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Dala amakhono okuzuza, ukumodela nokuhlelwa kwamamodeli amathathu-ntathu. Lezi zifundo zifaka ukufundwa kwe-3Ds Max, olunye lwezinhlelo ezisetshenziswa kakhulu emkhakheni wokumodela; kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi ulwazi olusebenzisana ngawo kwezinye izinhlelo zokusebenza, njengeRecap neBlender. Ngokwengeziwe, kufaka phakathi isifundo se-Revit Architecture ukuqonda ukuthi ukumodela kusebenza kanjani ngaphansi kwendlela ye-BIM kanye ne-Inventor Nastran ukuze kufundwe ngokumodelwa nokuhlaziywa kwezingxenye ezithile ekukhiqizeni.
Izifundo zingathathwa ngokuzimela, ukuthola idiploma yesifundo ngasinye kepha «Isazi seDiploma 3D Modeling»Ikhishwa kuphela lapho umsebenzisi ethathe zonke izifundo ohambweni.
Thumela Previous«Langaphambilini Revit MEP Course - Ukufaka Amapayipi
Post Next IDiploma - Isazi seGeospatialOkulandelayo »